UIgnaz Semmelweis: IChildbed Fever & Germ Theory of Disease
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBislama IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKikaonde IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMaltese IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiPangasina IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseCuzco) IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTatar IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTok Pisin IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUrdu IsiVietnam IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
NANGONA uIgnaz Semmelweis engengomntu waziwayo, umsebenzi awawenzayo uzinceda kakhulu iintsapho zale mihla. Wazalelwa eBuda (ngoku eyiBudapest), eHungary, waza wafumana isidanga sakhe sezamayeza kwiYunivesithi yaseVienna ngo-1844. Ekuthatheni kwakhe iintambo njengesekela loprofesa owayekwiFirst Maternity Clinic yeSibhedlele SaseVienna ngo-1846, uSemmelweis wajongana nento emanyumnyezi—amabhinqa angaphezu kwe-13 pesenti abeleka apho ayebulawa sisifo esibizwa ngokuba yichildbed fever.
Baninzi abantu ababefunisela ngonobangela wesi sifo, kodwa akukho namnye owayicombululayo le ngxubakaxaka. Yonke imizamo yokuhlisa inani labantu abafayo yawa phantsi. Ekhathazwa kukubona oomama abaninzi besifa kabuhlungu, uSemmelweis wagqiba kwelokuba afumane unobangela wesi sifo aze asithintele.
Isibhedlele awayesebenza kuso uSemmelweis sasineeklini ezimbini zokubelekisa, ibe okubangel’ umdla kukuba kule yokuqala ikliniki babebaninzi oomama abafayo kunakule yesibini. Ekuphela komahluko owawukho kwezi kliniki zimbini yayikukuba kule yokuqala kwakufundiswa oogqirha kuze kweyesibini kufundiswe ababelekisi. Yintoni ke eyayibangela ukuba kubekho umahluko ongaka kumanani abantu abafa kwezi kliniki? Xa wayejikajikana nalo mbuzo, uSemmelweis wacokisa ukukhangela oonobangela besi sifo, kodwa tu ukuvela unobangela.
Ebutsheni buka-1847, uSemmelweis wawubhaqa umkhondo. Umhlobo wakhe awayesebenza naye uJakob Kolletschka wayebulelwe yityhefu eyangena enxebeni lakhe emva kokuba ezisike xa wayeqhaqha isidumbu ephanda unobangela wokufa. Njengoko wayefunda ingxelo yonobangela wokufa kukaKolletschka, uSemmelweis wafumanisa ukuba zikho izinto eyayifana ngazo neengxelo zabantu ababebulewe yichildbed fever. Ngenxa yoko, uSemmelweis wacinga ukuba mhlawumbi yityhefu esuka kwizidumbu eyayisosulela izigulana ezikhulelweyo, ize idale ichildbed fever. Oogqirha kunye nabo babefundela unyango, ababedla ngokuqhaqha izidumbu ngaphambi kokuba baye kwiwadi yabeze kubeleka, bengaqondi baye bosulela amabhinqa akhulelweyo ebudeni bokuwaxilonga nasebudeni bokuwabelekisa! Kwiwadi yesibini inani labafayo laliphantsi kuba abantu abafundela ukubelekisa babengasebenzi ngezidumbu.
Ngoko nangoko uSemmelweis waba ngqongqo waza wayalela ukuba kuhlanjwe izandla, nto leyo eyayiquka ukukhuculwa kweentsholongwane ezandleni kusetyenziswa umxube wekalika neklorin (chlorinated lime) ngaphambi kokuba kuxilongwe amabhinqa akhulelweyo. Iziphumo zothusa: inani lamabhinqa afayo lehla lisuka ku-18,27 pesenti ngoAprili laya kutsho ku-0,19 pesenti ekupheleni kwaloo nyaka.
“Le mfundiso yam ikho ngenjongo yokususa isikizi kwizibhedlele zokubelekisa, ukusindisa umfazi abuyele endodeni yakhe nomama abuyele kumntwana wakhe.”—UIgnaz Semmelweis
Le mpumelelo kaSemmelweis ayizange ihle kamnandi kwabanye abantu. Iziphumo awazifumanayo zazingqubana nendlela umphathi wakhe awayeyijonga ngayo le nto, kwaye lo mphathi wayecatshukiswa nayinkani kaSemmelweis. Ekugqibeleni uSemmelweis waphelelwa ngumsebenzi eVienna waza wabuyela eHungary. Akufika apho wabamba iintambo kwisebe elijongene nabakhulelweyo kwiSt. Rochus Hospital yasePest, ibe iindlela zakhe zabangela ukuba inani labafayo lehle liye kutsho ngaphantsi kwe-1 pesenti.
Ngo-1861, uSemmelweis wapapasha incwadi yakhe ethi, The Cause, Concept, and Prophylaxis of Childbed Fever. Ngelishwa, izinto awazifumanisayo azizange zigqalwe njengezibalulekileyo de kwadlula iminyaka. Kwelinye icala, baninzi abantu abafayo ababenokuhlangulwa.
USemmelweis waqinisekisa ukuba kusetyenziswa imigaqo yococeko kwiindawo zonyango ezaziphantsi kwakhe.—Painting by Robert Thom
Ekugqibeleni uSemmelweis wade wamkelwa njengeqhawe elafaka isandla kwindlela yokukhusela ukosuleleka ziintsholongwane esetyenziswa ngoku. Umsebenzi wakhe wenza kwacaca ukuba zikho izinto ezingabonakaliyo ngeliso lenyama ezinokudala izifo. Uyinxalenye yembali yengcamango yokuba kukho izinto ekuthiwa ziintsholongwane ezidala izifo, eye yagqalwa “njengelona galelo likhulu kwezamayeza nakwezonyango.” Okubangel’ umdla kukuba kwiminyaka engaphezu kwe-3 000 eyadlulayo, uMthetho kaMoses, owathi kamva waqukwa eBhayibhileni, wawusele uchaza ukuba zifanele ziphathwe njani na izidumbu.
EYurophu kwiminyaka yoo-1800, amabhinqa amaninzi ayebulawa yichildbed fever, isifo esasibulala ukuya kutsho kwi-30 pesenti yabantu abanaso.
Iintsholongwane zabonwa kwizibonakhulu (microscope) ukususela ngo-1674, kodwa yayingaziwa into yokuba zinobungozi. Yayiqhelekile into yokuba oogqirha babelekise emva kokuba beqhaqhe isidumbu, bengakhange bahlambe izandla zabo ngento ebulala iintsholongwane.
NguSemmelweis owaqalisa into yokuba kuhlanjwe izandla kwezamayeza, nto leyo eye yasindisa ubomi babantu abaninzi.
Oko Kwathethwa YiBhayibhile
Ngokutsho koMthetho kaMoses, osusela kwinkulungwane ye-16 B.C.E., nabani na owayechukumisa isidumbu wayeye angahlambuluki kangangeentsuku ezisixhenxe kwaye kwakufuneka alandele inkqubo yokumhlambulula eyayiquka ukuhlamba umzimba nokuhlamba impahla ayinxibileyo. Ebudeni beli xesha, loo mntu kwakufuneka angabachukumisi abanye abantu.—Numeri 19:11-22.
Ukuchana KweBhayibhile Ngokwesayensi Isayensi NeBhayibhile